Fans vanoita seLogan Paul vs KSI kurwa inosekwa mukati meiyo KSI Show - Pop-Tsika
Fans vanoita seLogan Paul vs KSI inosekwa mukati meiyo KSI Show
British YouTuber KSI ichangobva kuburitsa yake titular show pane iyo MomentHouse webhusaiti ine yakakosha muenzi nyeredzi Logan Paul. Mune karavhani yazvino paKSI yeYouTube, akaseka rudzi rwekudzokorora naPaul.
Munguva yekuratidzira kweKSI, iye naPaul vakatsvinyira pavakapinda mumhete yetsiva kuti vangangodzokazve mushure memutambo wavo wekupedzisira wakakonzera dhirowa. Ivo vaviri vakagovana zvidimbu zvishoma zvakare, vachitora hushamwari kuchera kune mumwe nemumwe. KSI akataura kuti Logan Paul akamurova kumusana kwemusoro, uko Paul akapindura, 'kwete izvo zvakaoma.'
Paul akabva ataura kuti pakanga pasina mutongi wetsiva kuti atore divi reKSI, kudzoka kumutambo wavo wekutanga wetsiva. KSI yakati:
'Ndave kuda kukugogodza zvakare zvakaoma, unenge uchiita mavhidhiyo emuzambiringa futi.'
Ivo vaviri vakabva vapinda pakati pechindori, uye vese vakakanda chibhakera pamberi pechiitiko chakaoma-kugadzirwa uye nekukurumidza kupera. Mamiriro ekupedzisira anoyeuchidza Rocky III.
Verenga zvakare: Izvi zvinoita sekutambanuka: Ethan Klein anogashira kumashure mushure mekudaidzira James Charles kuti ave panhandare
Vafans vanoita KSI neLogan Paul teaser kurwa
Chiitiko chega, chekutanga chakagovaniswa nevatengi vanobhadhara chete, chakazogovaniswa paYouTube chisati chakurumidza kupararira munharaunda yepamhepo. Vazhinji vashandisi veTwitter vakagovana maitiro avo kune 'Iyo KSI Ratidza' zvakazara, nepo vamwe vakatsanangurwa mune teaser zvinogona kuitika zvakare.
Vamwe vashandisi vakataura kuti vaviri vadziri vezvinhu 'vakavapfekedza' ivo nevateereri vemutambo wechitatu wetsiva.
KSI NALOGAN PAUL achimhanya kubva pa internet mushure mekupedzisa nyika neine pikicha pic.twitter.com/gBl4mBNSQz
- DAN (@DanPaulsive) Chikunguru 17, 2021
Verenga zvakare: Ashley Ellerin aive ani? Zvese nezve aimbova musikana waAshton Kutcher, semuurayi wake 'The Hollywood Ripper,' anotongerwa rufu
Mumwe mushandisi akataura kuti KSI naPaul vakaita sei zvine hushamwari mushure mekunge 'marara achitaura' vasati varwa. Vamwe vashandisi vaida kuona zvimwe zvevaviri maTubTubers vachishandira pamwe.
Asi vazhinji vashandisi vakaodzwa mwoyo kuti chikamu chetsiva pakati peKSI naLogan Paul hachina kupfuura nepachose.
KSI uye Logan Paul
Zvakatangira sei Zviri kufamba sei pic.twitter.com/5t42rjAjTq
- SakaDaxe (@SakaDaxe) Chikunguru 17, 2021
Logan Paul muKSI show pic.twitter.com/FCi6dLl5cC
- azeem.choudhary (@ azeemch72997420) Chikunguru 18, 2021
yakadaro dope pfungwa & inonakidza kwazvo .. isu tinonyatsoda imwe KSI & Logan collab #TheKSIshow
- Delux 🇳🇿 (@DeluxNZ) Chikunguru 17, 2021
Ini ndinofunga dambudziko apa raive rekushambadzwa kwaro. JJ aifungidzira izvi vashanyi vakawanda, mutambo ungangoparadzanisa pakati pake naLogan, uye akati zvaizoenda kune chiitiko chegore. Zvakadaro haina kurarama kusvika pane izvi zvaitarisirwa sezvo yakangopedzisira yave konzati.
- Gravy :) (@ Gravy_783) Chikunguru 18, 2021
Pakange pasina KSI v Logan Paul 3 :( pic.twitter.com/DZlHMDsKHd
- xcite (@xcitetwt) Chikunguru 17, 2021
Ndiri pano wehukama hwe logan & ksi #TheKSIShow
- :) (@sdmntwt) Chikunguru 17, 2021
Ndeipi iyo Logan v ksi 3 iri #ksishow @KSI It’s️ iri W tho
- Vanix (@_fnVanix) Chikunguru 17, 2021
Kuona Logan neksi pamwe chete kwakanyemwerera pachiso changu
- Nathaniel (@Hyper_ActiveYT) Chikunguru 17, 2021
Logan: ini ne ksi tiri shamwari izvozvi uye vezvemabhizinesi
- ~ # AOTP ~ (@ JJ0latunji) Chikunguru 17, 2021
WHERES YANGU KSI VS LOGAN PAUL 3 https://t.co/QmNCymDju0
- Behnja (@leBehnja) Chikunguru 17, 2021
KSI kana Paul havana kuuya mberi nekumwe kuziviswa pamutambo wechitatu wetsiva. Panga pasina zvimwe zvekuzivisa zvechiitiko chechipiri che'KSI Show. '
Verenga zvakare: Nei Lil Nas X achienda kumatare? Mhosva yemhosva pamusoro pa 'Satani Shoes' yakatsanangurwa senge rapper majee nezvekuenda kujeri
Batsira Sportskeeda kuvandudza kufukidzwa kwayo kwepop-tsika nhau. Tora ongororo yemaminetsi matatu ikozvino .
Matanho gumi Ekusimudzira Hunhu Hwepfungwa Hwako Muupenyu Hwako
Nzira 11 dzeKunakidzwa Noupenyu Sezvisina kumboitika
Mari Mune Iyo Bhangi 2019 Kuongorora: Gakava remusoro wezita shanduko, Kukura kukuru mukukwikwidza kwemanera evarume kwakaratidzwa? (05/19)
Maitiro Ekurumbidza A Guy (+ 40 Akanyanya Kurumbidza KweVarume)
Chii chakakosha mambure aTodrick Hall? Kutarisa hupfumi hwake apo paanova kumeso kwekuzvikudza kweMorphe mwedzi wekuratidzira
Maitiro Ekuda Mumwe Munhu Ane Nyaya dzekusiya: 8 Mazano Akakosha
Iko kusimuka kweWWE Vakadzi Shanduko
5 WWE Superstars John Cena ishamwari dzakanaka na
Mafirimu 20 Achaita Kuti Ufunge Nezve Hupenyu, Rudo, Chokwadi, Uye Zvazvinoreva Kuva Munhu
Peter Thomas Roth ndiani? Anne Heche anogona kunge achifambidzana neyekuchengetedza ganda brand muvambi
18 Yenhema Dzidziso Dzenhema Nezve Hupenyu Dzaunofanirwa Kuti Uzunze
5 Zvinhu zvinogona kuitika paWWE Crown Jewel 2019
kana mumwe munhu akaramba kukuregerera
nzira dzerudo dzekushamisa musikana wako
sei kutamba nesimba kuti uwane nemukomana
yakawanda sei jared padalecki inogadzira
zvekuita kana iwe uchidzokera kumba wega usiku
handina kukodzera mukomana wangu